Amin'ny firy taona no mihinana irery ny saka | Noti saka
Rehefa teraka ny saka dia mandeha ho azy ny fanandramany ny sakafony voalohany: rononon-dreny. Izay ihany no hohaninao mandra-pahatongan'ny nifinao hiditra, zavatra hitranga aorian'ny efa-bolana eo ho eo. Amin'izay fotoana izay ihany no hitsahatra ny fampinonoan'ny reniny azy.
Noho izany dia zava-dehibe ny fahalalana amin'ny firy taona no mihinana irery ny saka, ary inona ny sakafo azontsika omena azy ireo ho vonona rehefa tonga ny fotoana.
1 Amin'ny firy taona no misakafo irery ny saka?
2 Ahoana no hahalala ny taonan'ny saka?
3 Inona no fihinan'ny saka vao teraka?
3.1 Inona no azoko omena saka zaza?
4 Ahoana no fanalana zaza?
5 Inona no nohanin'ny saka iray volana?
6 Ahoana ny fomba hampianarana saka hihinana irery?
7 Amin'ny firy taona no heveriko fa mihinana saka?
Amin'ny firy taona no misakafo irery ny saka?
Hiankina betsaka amin'ny hazakazaka izany, fa matetika eo anelanelan'ny iray volana sy sasany sy roa volana izy ireo dia efa manana valanorano matanjaka ampy hohanina. Ny zava-mitranga dia mbola kely loatra izy ireo amin'izany taona izany dia tsy afaka mamahana azy ireo arakaraka ny inona, ka asaina manome azy ireo sakafo mando hanamorana ny sakafo azy ireo.
Raha sendra misafidy ny hanome sakafo azy ireo ianao dia tsy maintsy ho iray manokana ho an'ny zanany izy io, satria kely kokoa ny voam-bary. Ho fanampin'izany, zava-dehibe ny tsy hitondranao serealy, satria izy ireo dia mety hiteraka tsy fahazakana.
Ahoana no hahalala ny taonan'ny saka?
Raha te hahasoa anao kokoa ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba hahalala ny taonan'ny saka tanora, satria ny iray amin'ny herinandro dia tsy mihinana mitovy amin'ny iray volana hafa.
0-3 andro iainana: manana maso mikimpy, sofina mirakotra ary ny vatan'ny tadim-poitra.
5-8 andro: misokatra ny sofina. Afaka manomboka mandady izy nefa kely.
2-3 herinandro: manomboka manokatra ny masony, izay ho manga (hofaranany hatramin'ny faran'ny herinandro fahatelo). Amin'izao vanim-potoana izao dia mivoaka ny nifin-jaza, ny voalohany dia ny insisors.
3-4 herinandro: mivoaka ny canine azy, ary efa mandeha amin-kerim-po izy na dia somary mihetsiketsika kely aza.
4-6 herinandro: Mivoaka ny premolars, izay nify eo anelanelan'ny canine sy ny molars. Hanomboka hiseho ny lokon'ny maso farany. Amin'izao vanim-potoana izao dia miaina toy ny alika kely ratsy fanahy ilay biby: milalao, mihazakazaka, matory ary indraindray mihinana.
4 hatramin'ny 6 volana: fiainana mahazatra. Afaka manana ny voalohany ianao zotom-pony, ary nify maharitra mivoaka:
6 incisors amin'ny valanoranony ambony ary 6 amin'ny valanorano ambany
Canine 2 amin'ny valanoranony ambony ary 2 amin'ny valanoranony ambany
3 premolar ao amin'ny valanoranony ambony ary 2 amin'ny valanorano ambany
Inona no fihinan'ny saka vao teraka?
Araka ny efa nolazainay, ilay saka raha vao teraka izy dia mitady reny reniny hohaniny mihinana ny rononony. Ity no tokony ho sakafo voalohany, satria io no zava-dehibe indrindra. Izy irery no manana ny otrikaina ilainao mba hanombohana fitomboana sy fahasalamana tsara koa.
Ary izany tokoa Ny rononon-dreny dia tena colostrum mandritra ny roa andro voalohany, izay loharanom-pahalalana immunoglobulins (antibodies miaro amin'ny viriosy, bakteria, sns. izay miteraka aretina) (hanome anao hevitra: amin'ny ronono ny fifantohana dia latsaky ny 1 grama isaky ny litatra, raha ampitahaina amin'ny 40-50g / l an'ny colostrum feline). Raha tsy afaka misotro azy ny alikakelyNa satria maty ny reniny, marary na tsy te hikarakara azy - zavatra izay tsy dia fahita loatra, - dia hanana fotoana sarotra velona.
Inona no azoko omena saka zaza?
Tena mahazatra ny mahita saka eo amin'ny arabe, tsy misy reny. Hitan'ny zana-drahalahiko ny saka ahy Sasha tamin'ny 2016 tany an-tsaha, ary ny tenako dia nahita an'i Bicho malalako teo akaikin'ny tobim-pahasalamana. Vao andro vitsivitsy monja izy; raha ny marina dia mbola tsy nanokatra ny masony izy; etsy ankilany, efa iray volana izy. Fa koa, Tsy mora ny namoaka azy ireo.
Tsy maintsy nifehy tena be isika, niezaka ny tsy hatsiaka na mafana loatra, ary ambonin'izany rehetra izany dia tokony hihinana tsara, raha tsy izany dia mety harary izy ireo. Izany no antony hihaonanao amin'ny saka, tena ilaina ny manome azy ronono solony ho hitanao amidy any amin'ny toeram-pitsaboana biby na fivarotana biby fiompy ary manaraka ny torolàlana izay voasoratra ao amin'ilay taratasy ianao, isaky ny 3-4 ora (afa-tsy amin'ny alina raha salama izy: raha noana izy dia hampahafantatra anao, aza manahy).
Raha tsy misy fomba hahitana ronono mpisolo toerana dia azonao atao ny manome azy ireto karazana mix ronono saka:
Ronono feno tsy misy lactose 250ml
Crème mavesatra 150ml
Yolk atody 1 (tsy misy fotsy)
Tantely iray sotro
Hamarino fa mafana izy io, manodidina ny 37ºC. Raha mangatsiaka na mafana kokoa dia tsy tiany izany, ary tsy lazaina intsony fa tsy natoraly ny manome azy toy izany.
Ahoana no fanalana zaza?
Kitty dia tokony manomboka mihinana sakafo matanjaka malefaka manodidina ny herinandro fahaefatra fahefatra nahaterahana. Amin'ity taona ity dia hisokatra ny masony, miloko manga tsara tarehy, ary handeha amin'ny filaminana sy fahatokisan-tena bebe kokoa izy. Ny sasany aza ampirisihina hihazakazaka, ka tsy te-ho ao anaty fandrian-jaza intsony izy ireo.
Raha miaraka amin'ny reniny izy dia hikarakara ny fampahafantarana azy fa tsy hanome ronono azy intsony izy isaky ny maniry, fa tonga ny fotoana hihinanany zavatra hafa. Fa raha tsy dia tsara vintana izy dia tsy maintsy ianao no manome ronono azy ary mieritreritra mifandimby aho. Holazaiko aminao ny nahavitako azy:
Herinandro voalohany fanosorana: tavoahangy 4 + patety 2 servety ho an'ny zanak'alika isan'andro
Herinandro faharoa: tavoahangy 3 + patety 3 sotro
Herinandro fahatelo: tavoahangy 2 + patety 4 andiany
Nanomboka tamin'ny herinandro fahefatra ka hatramin'ny faha-roa taonany: pates 6 andian-dronono, ny sasany nalona ronono
Inona no nohanin'ny saka iray volana?
Rehefa raisina an-tsaina fa, amin'ny ankapobeny, ny saka dia manomboka maneho fahalianana amin'ny sakafo iray volana aorian'ny nahaterahany (na dia mety hisy aza ny sasany izay tsy te-hijanona hisotro ronono hatramin'ny roa volana), tena ilaina tokoa, rehefa afaka 30 andro, andeha omena azy ireo patés (sakafo lena) ho an'ny kittens. Mba hivoaran'izy ireo tsara koa dia mamporisika anao aho hisafidy olona iray manana kalitao tsara manana atiny hena avo (tsy latsaky ny 70%).
Azonao atao ihany koa ny manome azy sakafo alona anaty ronono soloina, fa raha ny zavatra niainako dia manoro hevitra anao aho hanome azy kaline, satria ho mora kokoa aminy ny mihinana azy.
Ahoana ny fomba hampianarana saka hihinana irery?
Ny saka dia mianatra amin'ny fanahafana ny reniny sy ny iray tampo aminy. Raha tsy miara-miaina amin'izy ireo izy, dia mety ho mpampianatra hafa ny saka hafa, fa raha io bitika kely io ihany no antsy ao an-trano dia mety ho tamin'ny voalohany mila manampy azy hianatra mihinana ianao.
Raha sendra an'ity toe-javatra ity ianao dia makà sakafo kely - saika tsy misy, toy ny lohan'ny lalao - ary apetraho eo am-bavanao ary akatony moramora nefa mafy. Rehefa voajanahary dia hitelina izy ary azo inoana fa hihinana irery.
Amin'ny firy taona no heveriko fa mihinana saka?
Miankina amin'ny karazan-tsakafo inona izany: raha mando izy, amin'ny patés, azonao atao ny mihinana amin'ny herinandro fahatelo na fahefatra; Etsy ankilany, raha maina, rehefa tsy maintsy mitsako ianao dia mila miandry roa volana vao manomboka manome azy, ary na dia mety handraraka azy amin'ny rano aza ianao mba ho mora aminao.
Zava-dehibe ny mahafantatra an'izany aza maika ny hampisaraka ny reny amin'ny saka. Ho fantany rehefa afaka mijanona tsy misotro ronono ny zanany kely - mazàna, ao anatin'ny 2 volana, saingy mety haharitra ela kokoa, indrindra raha karazana lehibe toy ny Maine Coon na ny Ala Norvezy-. Manomboka amin'ny 3-4 volana dia afaka mihinana sakafo maina ny kittens nefa tsy misy olana, satria tsy ho ela dia hifarana tanteraka ny nifiny: amin'ny taona iray.
Rehefa mandeha haingana ny fotoana dia manoro hevitra anao izahay mba hiomana foana ny fakantsarinao sambory ireo fotoana mampihomehy ireo hatramin'ny fahazazan'ny namanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » sakafo » Amin'ny firy taona no mihinana irery ny saka
Antonella Bazan dia hoy izy:
Salama, manana kittens efatra aho izay vao tonga iray volana ary ny iray tamin'izy ireo te hihinana ny sakafon-dreniny, mety ho famantarana ve izany fa vonona hihinana sakafo izy ireo ary hanome ronono?
Valiny tamin'i Antonella Bazan
Eny tokoa. Ankehitriny ianao dia afaka manomboka manome azy sakafo omena rano lena, na kapoaka ho an'ny zanany. Fa hatramin'ny roa volana dia ilaina ny misotro rononon-dreniny indraindray.
Leidy dia hoy izy:
Salama, vao naka zazakely iray iray volana teo ho eo aho, nilaozan'izy ireo nilaozana izy, tsy hainy mihinana na maniry hanao izany, omeko sakafo matsiro sy hena voatoto izy ary tsy misy, mila mividy ronono manokana kittens ary omeo tavoahangy izy, Inona no fantatro Manasarotra ahy izany satria miasa mandritra ny tontolo andro aho, inona no azoko atao hisakafo irery ??? Toa salama tsara izy ary mailo be, ny hany olana dia ny resaka sakafo, miankina amiko 100%.
Valiny tamin'i Leidy
Amin'izany taona izany ny saka dia mila olona hamahana azy, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny faha-2 herinandro azy. Aleo ianao manontany olon-tiana hijery raha afaka mandray an-tanana izy ireo. Azonao atao ny manandrana manome saka saka saka lena azy, na saka saka maina voahosotra ronono, nefa mbola kely loatra izy ka tsy afaka mihinana irery.
Salama, manana saka 2 volana aho fa mbola tsy misakafo irery. Napetrako tao anaty rano ny ronono saka, ronono saka ary tsy liana tamin'iza ... Tokony homeko ny tavoahangiko sy ny sakafoko. Efa reraka aho satria efa tao anatin'ity toe-javatra ity hatramin'ny 10 andro, ary indraindray tsy manam-potoana.
Manampy ahy tsy haiko izay hatao mba hahatonga azy hihinana irery. Nampifangaroiko amina boaty ho an'ny saka koa ny sakafony ary mihinana kely izy nefa tsy izy rehetra.
Indraindray ny saka dia mila misotro ronono saka lava. Efa nanandrana nanome tuna ve ianao? Amin'ny maha sakafo malefaka azy dia tsy hikasika ny olana amin'ny fitsakoana azy io.
Na ahoana na ahoana, ny fitsidihana ny mpitsabo dia tsy mankarary, satria mety marary ny vavanao na ny vavony.
Miarahaba anao ary mampahery indrindra.
m. masoandro dia hoy izy:
Teraka tamin'ny 11th i Migatita ary nanana kittens tsara tarehy 2 aho manantena fa toa azy ireo nandritra ny 3 herinandro izy dia nanomboka te hihinana lasopy sy ron-kena na dia tsy namela ny reniny minono ny reniny nitaiza ny yorsai aza aho
Mamaly an'i m.sol
Amin'izany taona izany ny sasany dia manomboka maniry ny hanandrana karazana sakafo hafa, fa hatramin'ny 2 volana na mihoatra dia hanohy misotro ronono izy ireo indraindray.
Salama, niteraka kittens 5 ny zanako vavy 15 andro lasa izay, tao anaty boaty akaikin'ny faritra lakozia izy ireo, saingy izao dia te-hamindra azy ireo amin'ny toerana ambanin'ny fandriana izy, inona no mety ho antony? Tsy tianao ve ilay habaka sa satria antitra izy ireo?
Mety tsy tianao ilay toerana. Ny lakozia dia efitrano iray lanin'ny olona fotoana betsaka, fa tsy misy olona ao ambanin'ny fandriana under.
Salama, andro vitsivitsy lasa izay nifankahita tamina saka iray iray volana na iray volana sy tapany izahay dia nanomboka nomeko azy ny tavoahangy isaky ny adiny telo fa ny roa na telo andro voalohany fotsiny no nalainy tsara ary tsy tiany izany izahay dia nanomboka tamin'ny pate sy ny kibble ho an'ny saka ary mihinana azy lehibe ny olana dia tsy fantatsika hoe impiry hamahana azy, raha omentsika betsaka na kely
Ny tsara indrindra dia ny hamelana ny mpamahana sakafo ho feno foana, satria mihinana imbetsaka isan'andro ireo biby ireo 🙂.
Na ahoana na ahoana, raha tsy tianao na tsy avelanao ho afaka maimaim-poana izy io, ny habetsaky ny soso-kevitra arakaraka ny taonanao sy ny lanjanao dia aseho eo amin'ny kitapo famahanana, fa mihoatra ny 25 grama dia mifanaraka amin'ny 5 grama isan'andro (tsy maintsy misy Andiany 24 isaky ny XNUMX ora).
Francisco de la Fuete dia hoy izy:
5 servings an'ny 25grs. isan'andro ve tsy be loatra ireo?
Valiny tamin'i Francisco de la Fuete
Misaotra anao nanontany, satria tamin'izay no nahitako fa diso ny nanoratako ny hevitro. Te-hiteny aho, manodidina ny 25 grama isan'andro no miparitaka amin'ny servings 5.
Manitsy izany aho izao.
Salama, manana saka iray aho fa nahafoy ny reniny tamin'ny fahaterahany, efa ho iray volana izy no hanome azy ronono manetona azy, fa satria tsy te hisotro izy, ho tsara ve ny manomboka manome azy tsiro sakafo ?
Valio i Yasna
Eny, amin'ity taona ity dia afaka manomboka mihinana saka saka mando ianao, na mamono ronono na rano lena.
Salama, manana kittens 5 volana aho ary mihinana irery sy misotro rano izy ireo, tsy mijanona mangina ary mivoaka avy ao anaty boaty ary tsy dia nijery firy ny reniny, te hahalala izy raha azoko omena azy ireo any amin'ny tompony MISAOTRA
Kittens dia tsy maintsy miaraka amin'ny reniny sy ny iray tam-po aminy mandritra ny roa volana farafahakeliny. Na dia efa misakafo irery aza izy ireo ary tsy mijanona dia mila fantany hoe inona ny fetra ara-tsosialy, ao anatin'izany: ahoana ary rahoviana aho no afaka milalao miaraka amin'ny olona iray, hatraiza ny manaikitra, raha tsy maintsy manelingelina ny be antitra sns aho. .
Raha tsy misy an'ity fototra ity dia avo lenta ny mety hitranganao olana amin'ny ankohonanao vaovao.
Lucia Estraño dia hoy izy:
Salama, manana kittens telo volana iray aho ary tsy haiko raha afaka manomboka mamelona azy ireo sakafo matanjaka toy ny gatarina na croquette ... Manahy koa aho fa manana parasy izy ireo ary mikorisa betsaka izy ireo hahafahako manao azy ireo na raha azoko atao ny mandro azy ireo amin'ny alàlan'ny faniriana kely. misaotra sy arahaba.
Valiny tamin'i Lucia Estraño
Eny, afaka iray volana izy ireo dia afaka manomboka sakafo matanjaka, fa tsara kokoa ny manomboka amin'ny sakafo lena na lena ao anaty rano.
Ho an'ny parasy, ny zavatra miandry azy ireo dia ny fiandrasana mandra-pahatongan'ny roa volana, saingy mazava ho azy, tsy hiaraka amin'izy ireo mandritra ny iray volana izy ireo. Azonao atao izao manaraka izao: manapaha voasarimakirana ho tapatapaka ary ataovy ao anaty vilany misy rano, mandra-mangotraka. Araraka ao anaty koveta avy eo io rano io (tsy misy ny silaka), miandry azy hanafana sy handroana ireo zanany.
Zava-dehibe tokoa ny hamainanao tsara azy ireo avy eo, indrindra raha amin'ny ririnina ianao, satria raha tsy izany dia mety hangatsiaka izy ireo.
Salama amin'ity volana manaraka ity dia te haka zanak'ondry natolotr'izy ireo ahy aho. Tsy haiko raha tokony hanaiky azy aho satria tsy nampandrenesina aho ary matahotra aho fa hanana olana ny kely rehefa manasaraka azy amin'ny reniny dia hajanona ny fihinanana azy na tsy maintsy hisotro ronono izy ary tsy hanana ny reniny. mampinono azy.
Rahoviana no afaka misaraka amin'ny reniny ny saka iray?
Inona no azoko omena anao?
Ny saka dia azo sarahina amin'ny reny mandritra ny roa volana. Amin'izay taona izay dia efa afaka mihinana saka saka tsy misy olana izy ireo.
Miarahaba manana zanak'ondry iray herinandro aho, inona no tokony hanome sakafo azy? Efa amin'io taona io ve no manao ny filany irery?
Amin'izany taona izany dia tokony haka tavoahangy misy ronono ho an'ny kitina ianao, ary manomboka amin'ny herinandro faha-3 na faha-4 dia azonao atao ny manomboka manome azy io ho an'ny zanany izay voadoboka anaty ronono - ho an'ny saka-.
Mbola mila fanampiana kely hanala ny tenany izy, eny. Isaky ny fisakafoanana tsirairay dia tsy maintsy mandalo gauze na landihazo mando amin'ny rano mafana ianao amin'ny famoahana sy ny fivoahana.
Mandra-pahoviana no tsy maintsy ampitako aminy ilay landihazo?
Mandritra ny iray minitra dia ho ampy izy. Miarahaba ary misaotra.
Salama, herinandro lasa izay dia nahita zanak'ondry teo an-tokotaniko aho, nieritreritra ny tsy hikasika izany satria nieritreritra aho fa nalain'ny reniny io. Fotoana fohy taorian'ny nahitako ilay renim-pianakaviana, izay faritany. Nomeko sakafo mando izy mba hangoraka sy ho sariaka… nihinana izy. Fotoana vitsy lasa izay, rehefa nihaona irery tamin'ilay saka aho, dia nimonomonona tamiko koa izy. Tsy te hampisaraka azy ireo aho ary fantatro fa saka ny olona ny saka. Azoko atao ve ny milaza fa ahy ilay saka na eo aza ny fampianaran'ny olombelona mampiahiahy ny olombelona? Tsy te hanelingelina anao aho amin'ny hazakazaka an-drahalahy ataonao… Inona no antenaiko?
Azonao atao ny mahazo ny fahatokisan'ny zanakao kely amin'ny alàlan'ny fanomezana azy sakafo lena, satria ny fofony dia mihoatra ny maina ary matsiro kokoa ho azy ireo. Ho hitanao tsikelikely ny fomba hanatonany anao.
Herim-po, ho hitanao fa hahatratra azy io 🙂
SgiAlo dia hoy izy:
Salama hariva, misaotra an'ity fanamarihana ity, naka zazakely kely iray hitako fa nilaozana irery irery teny amin'ny arabe aho, nitondra azy tany amin'ny mpitsabo biby aho ary nilaza tamiko fa 18 andro monja izy, novidiko azy ny formule azy ary noheveriko fa tsy ho tafavoaka velona izy tamin'ny alina voalohany, soa ihany fa mbola herinandro eto amiko, ka nitodika aho rehefa afaka nihinana sakafo henjana, arahaba!
Valio amin'i SgiAlo
Misaotra anao, ary miarahaba ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana 🙂
Telo andro lasa izay, nisy lavaka filokana niseho tao amin'ny zaridainako. Nentinay tany amin'ny mpitsabo biby izy ary nolazainy taminay fa tokony ho 20 andro izy, saingy tsy nanazava izy fa tokony hanampy azy hanala ny tenany aho. Inona no tokony hataoko? ny alina voalohany nandondom-po fa mbola tsy vitany indray
Mandritra ny 20 andro dia tokony hihinana isaky ny 3-4 ora ianao, tavoahangy misy ronono ho an'ny zanak'ondry, na raha tsy mahavita mifangaro ronono ronono iray kapoaka ianao (tsy misy lactose raha tsy izany), yolk atody (fa tsy ny fotsy) ary iray sotro tsindrin-tsakafo ronono. Aorian'ny fisakafoanana tsirairay dia mila manampy azy hanala ny tenany ianao amin'ny alàlan'ny famoahana lamba mafana amin'ny faritra fivavia, manomboka amin'ny faran'ny kibony mankany amin'ny tongony.
Amin'ity taona ity dia afaka manomboka manome sakafo saka am-bifotsy ianao, saingy tsy maintsy ampidirina tsikelikely. Mandritra ny iray volana sy tapany dia tokony hanohy handray tavoahangy izy.
Salama! Manana kittens 4 iray volana aho, maty ny Masoandriko kely ny reniko. Ny fanontaniako dia raha afaka manome sakafo azy ireo aho, maka tavoahangy roa izy ireo ary ny roa kosa tsy te handray azy ...
Miala tsiny indrindra amin'ny fahaverezan'ny saka 🙁
Ireo ankizy kely anananao iray volana dia efa afaka manomboka mihinana sakafo matanjaka, toy ny sakafo lena ho an'ny zanak'ondry na sakafo-ho an'ny kittens- alemana anaty rano.
Na izany na tsy izany, farafaharatsiny, hatramin'ny enin-taona, dia tsara ny manome lovia misy ronono - ho an'ny zanany - satria indraindray izy ireo dia misotro. Mazava ho azy fa amin'ny herinandro faha-7 na faha-8 dia tokony hisotro rano fotsiny izy ireo.
Yeimy dia hoy izy:
Salama!! Manana kittens telo volana iray aho, ny zanako vavy, maty ny reniny ary tsy te hisotro ronono na hihinana na inona na inona ny zana-pilokana, fa nomen'ny zanako vavy kely mofo matsiro be izay nohaniny ary nohanin'ireo trano filokana. avy hatrany.mihinàna mofo? Sa maharary ny mihinana azy? Koa satria toy izany ny fotoana 🙁
Aza manao ……
Valio i Yeimy
Eny, tsy ratsy izany, saingy afaka iray volana dia tokony hihinana sakafo saka malemy izy ireo, araka ny fiheverako fa lena. Mazava ho azy, nohosorana ronono na rano mafana tokoa, satria raha tsy izany dia tsy hihinana azy izy ireo.
Na izany aza, mandritra izany fotoana izany dia zatra azy ireo ary mba tsy ho noana izy ireo, tsara kokoa ny manohy mihinana mofo malefaka. Fa andeha hampidiro azy ireo tsikelikely ilay sakafo lena lena lena. Azonao atao koa ny manandrana sakafo saka maina, lena koa.
Salama! Manana kittens telo aho sahabo ho iray volana, maty ny renin'izy ireo ary nomeko ronono an-tavy izy ireo satria tsy nahazo ronono ho an'ny zanak'ondry, nampisotroiko azy ireo mifantoka amin'izany ronono izany ary ny roa mihinana tsara, fa ny iray kosa tsy ary mitomany be, ary ankoatr'izay heveriko fa manao ratsy izy ireo satria voan'ny fivalanana izy ireo izao. Ny ataoko? Mahatsiaro ho tsy mikarakara tsara azy ireo aho.
Ny rononon'omby na omby dia toa ratsy amin'ny saka. Fa rehefa tsy mahita iray manokana ho an'ny zanak'ondry ianao dia tsy misy safidy hafa ankoatry ny manao azy ireo ... ao an-trano Mariho ity fomba fahandro ity:
Ronono iray manontolo 150ml
Yaorta voajanahary 50ml
Yolk atody manta - tsy misy fotsy-
Afangaro tsara ny zava-drehetra, hafanana kely mandra-pahafatiny, ary aroso.
Na izany na tsy izany, amin'ity taona ity ianao dia afaka manomboka manome sakafo lena ho an'ny kittens, voatetika tsara. Na koa sakafo saka saka mando atono anaty rano.
Salama, manana saka izay nomen'izy ireo ahy iray volana teo ho eo aho, tiako ho fantatra raha afaka mihinana sakafo matanjaka (tuna, akoho, hena voatoto), na mbola kely dia kely izany, ary raha sanatria tsy omeo, izay sakafo atoro ahy. Misaotra anao
Mamaly an'i dalma
Eny, afaka iray volana dia afaka manomboka mihinana sakafo saka henjana ianao, toy ny tin.
Ary afaka enina ka hatramin'ny fito herinandro dia azo atao ny manome azy hena voatoto.
Hector david dia hoy izy:
15 taona ny zanako vavy .. Fa ny reniny dia tsy manana ronono atoro anao
Valiny tamin'i Hector David
Ny tsara indrindra dia ny misotro ronono voaomana ho an'ny zanak'ondry, amidy any amin'ny toeram-pitsaboana sy ny fivarotana biby.
Raha tsy azonao amin'ny fomba rehetra io dia azonao atao ny manomana azy ho azy:
-150 ml ronono iray manontolo (tsy misy laktose, tsara kokoa)
-50 ml rano
-50 ml yaorta voajanahary
-Ahona atody atody (tsy misy fotsy)
-Ny crème mavesatra sotro iray sotro
Afangaro tsara ny zava-drehetra, ary mafanao kely, mandra-pahafatiny (eo amin'ny 37ºC).
Fiarahabana, fankaherezana 🙂.
Silvia Petrone dia hoy izy:
Salama, manana saka miaraka amin'ny zanany aho, ny zanany dia 1 volana ary mivoaka izy ireo ary milalao. Te hahafantatra aho raha ilaina ny manome sakafo azy ireo ankoatry ny sakafo omen'ny reniny azy ireo ary raha tsy maintsy nomena rano. Misaotra anao
Valiny tamin'i Silvia Petrone
Eny, iray volana izy ireo dia efa afaka mihinana saka saka. Tena ilaina ihany koa ny manomboka manome rano azy ireo.
Salama, manao ahoana ianao? Nanavotra zanak'ondry aho omaly ary handeha hanangana azy aho, mbola matahotra ny zava-drehetra izy satria efa saika nihazakazaka, tsy hitako izay omena azy fa tsy mbola nanana saka mihitsy izy. , inona no hatolonao anao momba ny iray volana sy sasany, antenaiko fa ny valinteninao, misaotra.
Amin'izany taona izany dia efa afaka mihinana sakafo matanjaka (malefaka) izy, toy ny kapoaka ho an'ny zanak'ondry na saka saka naonoina anaty rano.
Miarahaba, ary miarahaba anao 🙂.
Salama, manana kittens roa volana iray aho izay nohaniko ronono ho an'ny saka hatramin'ny nahaterahany, nanomboka nanome azy ireo sakafo sy latinina aho, ny iray amin'izy ireo dia mihinana tsara ny sakafo ary misotro rano fa ny iray kosa tsy misy lalana mihinana na inona na inona, tavoahangy fotsiny no tadiaviny fa efa nanandrana nihazakazaka ny ronono tao anaty feeder aho nefa tsy, zara raha manome tavoahangy hahitako raha noana nohaniny nefa tsy misy. Tsy mampatahotra fa mihinana kely izy ary tsy misakafo tsara
Efa nanandrana nanome sakafo mando ho an'ny zanany ve ianao? Raha izany dia manandrana manome ron-kena akoho (tsy misy bonbon), na ampahafantaro azy (somary an-kery nefa tsy handratra azy) sakafo mando kely. Sokafy ny vavany, ampidiro ary akatony. Mihidy hatrany mandra-pitelemana.
Izany no tsy maintsy nataoko tamin'ilay sakaizako, ary ankehitriny dia mihinana izay apetrany aminy izy. Tia ny zava-drehetra: s
Ary raha hitanao fa tsy misy lalana dia ento any amin'ny mpitsabo biby izy sao misy tsy mahazo aina manakana azy tsy hihinana.
Salama . Manana saka iray efa 3 herinandro aho ary manana zanany vavy 4 izy nefa manana roa andro na mihoatra izay rehefa manome sakafo azy ireo izy dia maharary sy mimenomenona ny fanaintainany, inona no azoko atao? MISAOTRA
Raha toa ka 3 herinandro ny saka dia afaka manomboka mihinana sakafo matanjaka malemy toa ny kalon'ny saka saka mando.
Azonao atao ny manome azy ireo kely - tena kely dia kely - amin'ny rantsan-tànanao, mametraka ny sakafo ao am-bavany, nefa tsy manindry. Manokatra ny vavany fotsiny ianao dia mampiditra sakafo.
Raha toa ka tsy tadiavin'izy ireo izany, ary amin'ny fiheverana fa efa manomboka mahatsapa fanaintainana ny reny rehefa mampinono azy ireo, dia tsy maintsy manizingizina isika.
Safidy iray hafa ny fividianana ronono ho an'ny zanany - amidy eny amin'ny tobim-pahasalamana veterinina - ary ezaha hampisotroina azy ireo avy ao am-paloharana.
Afaka roa volana, ny saka dia afaka mihinana irery, mamahana na kalina sakafo saka saka mando. Raha tsy tianao dia azonao atao anaty rano na ron-kena (tsy misy bonne).
Misaotra anao, Luis. 🙂
MITADIAVA TORELA dia hoy izy:
Roa volana lasa izay dia eo am-pitandremana zanany 5 aho, ny renin'izy ireo taorian'ny nahaterahany dia nilaozako izy ireo saingy mora tohina izy ireo, matahotra ny zava-drehetra izy ireo ary isaky ny miala amiko ny sakafony dia mihazakazaka eny rehetra eny izy ireo, ny fanontaniako dia azon'izy ireo atao ve mihinana cookies? '
Valio ho an'i GUADALUPE TORRELLY
Mandritra ny roa volana dia azonao atao ny manome sakafo azy ho an'ny kittens tafalentika anaty rano. Amin'izay izy ireo dia ho zatra misotro ny sakafo sarobidy.
Raha tsy tian'izy ireo izany dia omeo sakafo lena ho an'ny zanany izy ireo, ary asio rano eo akaikiny ny takelaka mba hahafahan'izy ireo misotro isaky ny maniry.
Manana fisalasalana aho, manana kittens roa aho izay telo herinandro (araka ny reniko), ary raha ny zavatra novakiako teto dia efa afaka manomboka mihinana zavatra nalona izy ireo, fa raha ny filazan'ny reniko, raha tsy mivoaka ny vazaran'izy ireo ( mihevitra izy fa tsy manana). Inona no azoko atao?
Ny saka saka dia tsy niraharaha azy ireo 4 na 5 andro lasa izay. Ary ankehitriny izahay manome anao mpisolo ronono ho an'ny saka. Izahay dia manome syringe azy. Tokony hanova tavoahangy ve aho?
Rahoviana aho no tsy tokony hanampy azy handeha ho any amin'ny trano fidiovana intsony?
Raha ny saka saka dia nikarakara azy ireo tsara mandraka ankehitriny ary tsy mbola nisy olana, ny zava-misy fa efa tsy raharahainy ny ankizy kely dia satria fantany fa ampy taona izy ireo mba hamelomana ny tenany. Mazava ho azy, mieritreritra aho fa sakafo mando ho an'ny kittens na sakafo maina ho an'ny zanak'ondry rendrika anaty rano.
Amin'ny telo herinandro dia tsy ilaina ny manome tavoahangy ho azy ireo.
Misaotra betsaka Monica
Julissa Fernandez Cueva dia hoy izy:
Salama, manana saka vavy 2 volana aho, manahy aho fa mihinana be dia be avy eo tsara tarehy, manompo azy kely aho ary na dia manohy mandoa aza izy dia lazao amiko fa ara-dalàna ve izany? Tsy hitako izay hatao, manahy aho satria mankafy ny fluff ahy
Valiny tamin'i Julissa Fernández Cueva
Mety manana katsentsitra tsinay ianao. Ny torohevitra omeko anao dia ny hitondranao azy any amin'ny mpitsabo biby.
Salama, manana saka aho 40 andro lasa izay izay nanana alika kely, tsy maintsy nomeko azy ny fanabeazana aizana satria nanomboka niditra amin'ny hafanana izy, mandra-pahatongan'ny fampinonoana ny alika kely sy ny alika kely, ny zava-misy fa mihinana pilina izy dia hahavita zavatra amin'izy ireo. ???
Raha ny marina dia hiteny aho hoe tsia, fa tsara kokoa raha manatona mpitsabo biby ianao.
Salama!!!! Hanome zanak'ondry iray volana sy sasany izy ireo ary nanontany tena aho raha ilaina ny manome azy ronono manokana ho azy ao anaty tavoahangy, na dia efa misakafo aza izy dia heveriko… ..?
Mamaly an'i Verònica
Mandritra ny iray volana sy tapany dia efa afaka mihinana zavatra matanjaka ianao (sakafo saka mando, na sakafo saka-kena maina atono anaty rano).
Salama, naka zanak'ondry izahay, hoy izy ireo taminay fa 2 volana izy, nefa milanja 250 grama, ara-dalàna ary ara-dalàna ny tsy filalaovany, matory foana izy, mihetsika fotsiny hihinana ny sakafony ary mankany amin'ny boaty fasika hanamaivanana ny tenany. Ankasitrahako ny valinteninao. Carina
Valiny tamin'i Carina
Milamina ny lanjany, ary ara-dalàna raha mandany ny ankamaroan'ny fotoana hatoriana izy, fa raha tsy milalao saika na inona na inona izy dia satria nisy zavatra nanjo azy. Mety manana katsentsitra tsinay ianao. Tokony hoentinao any amin'ny mpitsabo biby izy mba hijerena azy ary hanome azy ny fitsaboana sahaza indrindra.
Salama, jereo, manana kittens 5 aho izay efa iray volana ... manana nify izy ireo ary nanapa-kevitra ny hividy azy ireo saka saka ... ny sasany mihinana ... ary ny saka dia manome ronono azy ireo ihany ... tsy maninona izany ho an'ny Izy ireo hisotro ronono ary hihinana voamadinika iray na hafa ... tsia Mihinana be dia be izy ireo, voam-bary ihany no fihinanan'izy ireo ... tsy hampijaly azy ireo izany ... ny granite novidiko tamin'izy ireo dia tena kely ... ary misambotra poop ao anaty boaty fasika izy ireo. Misaotra anao
Raha mbola manome ronono azy ireo ny reniny dia tsara. Fa eny, iray volana dia efa mila manomboka mihinana sakafo matanjaka kokoa izy ireo 🙂.
Rossana Parada dia hoy izy:
Salama, manana saka 16 volana aho, manana hypoplasia izy, na eo aza izany dia manana fiainana ara-dalàna izy, handratra azy ny misotro ronono, tsy maintsy indraindray ianao, arahabaina
Valiny tamin'i Rossana Parada
Ny ronono ombivavy dia mety mankarary saka. Na izany aza, raha tsy misy lactose na manokana ho azy ireo, dia azonao atao ny mandray azy indraindray.
Salama! Tsy ampy herinandro lasa izay dia naka zanak'omby aho, satria ny saka saka dia nanana zanak'alika ary tsy afaka nijanona tao amin'izy rehetra izy, dia tratrako izy rehefa nanomboka nisakafo izy dia heveriko ho lena, fa amin'ny zavatra novakiako dia tsy Fantaro raha tsara ny nataontsika mba hampisarahana azy tsy ho ela amin'ny reniny (iray volana sy herinandro teo ho eo) izy dia miraikitra mandritra ny tontolo andro, tsy fantatro raha misy olana aminy na zazakely fotsiny izy, tiako toa anao manome torohevitra ahy, misaotra!
Valio amin'i Elia
Kittens dia tsy maintsy miaraka amin'ny reniny mandritra ny roa volana farafahakeliny. Afaka iray volana sy herinandro izy ireo dia afaka mihinana saka-saka zanak'ondry lena; ny sakafo maina mbola tsy azo tsakoina tsara.
Raha mitomany izy dia tsy maintsy avy amin'ny hanoanana, na satria mangatsiaka izy. Amin'izao vanim-potoana izao dia mbola tsy mahafehy tsara ny hafanan'ny vatany izy ireo.
METY VOLAM-BOLA IZAO ARY KITTEN AN'NY SADY FA TSY METY MIHAFAKA NY PEPAS IZY, NY TE HANAKA VOHAN'OLOMBELONA VOLA TSY METY NY FANTATRAO.
Valiny amin'i WILLIAM
Amin'ny iray volana sy tapany dia tsara kokoa ny mihinana sakafo saka mando, farafaharatsiny mandritra ny tapa-bolana.
Rehefa afaka roa volana dia afaka manome sakafo saka ianao, mando amin'ny rano kely na mifangaro amin'ny sakafo mando.
Armando Florez dia hoy izy:
Azo atao ve ny manafana saka rehefa mitaiza?
Ny saka dia manana zanany vavy iray volana.
Mamaly an'i Armando Florez
Tsia, tsy azo atao izany. Amin'io taona io dia mbola tsy nahatratra ny fahamatorana ara-nofo izy, zavatra hataony amin'ny 5-6 volana.
Delaila dia hoy izy:
Salama, manana saka kely eo amin'ny 3 volana eo aho, efa manana nify feno izy, nefa hitany fa tsy misakafo irery izy ary maty ny reniny, inona no azoko atao hamahana azy?
Mamaly an'i Delaila
Amin'io taona io dia zava-dehibe ny efa mihinanany samirery. Voahazo am-bifotsy ho an'ny kittens, voatetika tsara. Makà ary atsofohy eo am-bavanao; akatona mafy avy eo. Amin'ny fahatsapana ho azy manokana no hitelina azy.
Ity irery dia tokony ho ampy hanaitra ny filan-dratsiny, fa raha tsy izany kosa dia ataovy imbetsaka.
Bastien dia hoy izy:
Salama, manana olana lehibe aho ary tsy hitako izay hatao. Izaho sy ny fianakaviako dia naka saka avy teny an-dalana, bevohoka izy ary tao an-tranonay ireo saka tokony ho iray volana sy sasany lasa izay, omaly alina dia lasa ilay saka ary tsy niverina. Tsy fantatro izay hatao amin'ireo saka, misy enina amin'izy ireo ary tsy misy olona eto manana fotoana hanomezana sakafo azy ireo isaky ny roa na telo ora, manampy izany, tsy fantatro izay tokony hamahana azy ireo na inona.
Valiny tamin'i Bastien
Amin'izany taona izany dia tokony hihinana sakafo saka (kapoaka) mando, na sakafo saka rendrika anaty rano izy ireo.
Raha tsy afaka mikarakara izany ianao dia afaka mametraka takelaka "kittens omena" foana. Mety misy liana.
Astrid dia hoy izy:
Salama alina, tiako ho fantatra izay sakafo amina marika azoko omena ny zanako vavy roa volana sy ny fomba ampianarako azy hanala ny tenany ao anaty fasika. Misaotra.
Mandritra ny roa volana, ny filamatra dia ny mihinana sakafo lena mandritra ny telo volana farafaharatsiny. Lafo kokoa noho ny maina izy io, saingy satria mbola mitombo ny nifinao dia mety somary sarotra ny mitsako.
Safidy iray hafa ny handemana ny sakafo maina amin'ny rano.
Na inona na inona omenao azy dia tokony ho voafaritra tsara amin'ny saribakoly izy.
Mikasika ny marika, manome sosokevitra ireo izay tsy mampiasa serealy aho, toy ny Applaws, Acana, Orijen, Taste of the wild, True Instinct High Meat, sns.
Mikasika ny fanontanianao farany, ao amin'ny Ity lahatsoratra ity Manazava ny fomba hampianarana anao izahay.
Salama, manana saka iray volana aho ary 5 andro ny reniny maty niteraka ka dia natsangako ho kely dia kely izy. Ny kittens-ko dia nisotro ronono manokana ho an'ny zanak'alika izay tsy afaka nampinonoin'ny reniny fa andro vitsy lasa izay dia nivadika sakafo matanjaka ho an'ny zaza aho, nanandrana nandena azy io ho puree ary nampiditra azy tsikelikely tao am-bavany, saingy nolaviny izany. ary farany mamelona tavoahangy azy aho. Inona no azoko atao hanampiana azy hianatra mihinana irery?
Manoro ny faharetana aho ary manizingizina hatrany. Ohatra, azonao omena tavoahangy iray izy amin'ny maraina, fa amin'ny mitataovovonana dia andramo mametraka sakafo saka kely malemy kely ao am-bavany. Ataovy mihidy izany amin'ny alàlan'ny fanindriana moramora mandra-pitelany, zavatra tokony hataony ho azy.
Vantany vao vita, ny zavatra mahazatra dia ny hisakafo irery avy eo, fa raha hitanao fa mbola tsy tiany dia omeo kely hafa izy.
Tsikelikely dia tokony hihinana irery izy, fa raha mandalo ny andro nefa tsy mandeha izy dia ento any amin'ny mpitsabo biby raha sendra manana olana izy.
Stefanny dia hoy izy:
Salama, manana zanak'akanjo chinchilla persiana 3 volana aho ary tsy mahay mihinana izy, milelaka ny sakafo ary rehefa manandrana misambotra azy dia milatsaka avy ao am-bavany io, tsy hitako intsony izay hatao. ... Matahotra mafy aho fa tsy zazakely toy izany dia ronono ihany no fihinany.
Mila fanampiana aho, misaotra!
Valiny tamin'i Stefanny
Ny zavatra voalohany dia tokony hijerena raha manana olana amin'ny vavanao ianao, ohatra ny fanaintainana ohatra. Ka ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanamarina azy.
Raha salama tsara ny zava-drehetra, andramo afangaro amin'ny ronono ny saka (zanak'ondry) lena. Tetehina tsara ka zara raha mila mitsako. Raha mbola tsy hihinana izy dia makà sakafo kely atsoboka amin'ny ronono dia atsofohy ao am-bavany. Akatony mafy izy avy eo fa tsy haratra.
Amin'ny fanao voajanahary dia tokony hitelina izy, ary amin'izany dia mety ho tsapany fa tiany izy ary manomboka misakafo irery.
Raha tsy izany dia andramo indray ny mametraka sakafo kely ao am-bavany. Ary raha tsy izany, tonga amiko fa azonao omena sakafo amin'ny alàlan'ny syringe (tsy misy fanjaitra).
Loren azcarate dia hoy izy:
Salama, makà zanak'akano kely, nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy ary novidianay ronono manokana izy fa matory tontolo andro izy ary rehefa avoakanay avy any an-tranony izy dia mitomany be dia eo amin'ny 30 andro eo.
Mamaly an'i Loren azcarate
Amin'izany taona izany dia mahazatra azy ireo ny matory 18-20 ora. Raha matory bebe kokoa izy dia mety manana olana ara-pahasalamana izay mitaky fikarakarana ara-biby. Tsy inona izany fa tsy hoe, fa raha ny zanany kely kely toy izany dia aza matoky tena loatra.
Johan andres dia hoy izy:
Azafady, maika ny zanako vavy, maty ny reniko rehefa nanana azy ireo aho ary nivavaka tamin'izaho 15 taona ary tsy nanapatra 5 andro fa misakafo tsara ary matory ara-dalàna, inona no tokony hataoko? Efa nomeko rano mangotraka miaraka amin'ny paoma raha sanatria ka maharary na dia tsy hitako aza avelao izy hitaraina
Valio i Johan andres
10 minitra aorian'ny fisakafoana dia mila mandrisika ny faritra misy ny vanin-taovam-pananahana miaraka amina landihazo mando amin'ny rano mafana ianao, satria amin'izao taona izao dia tsy hainy ny manamaivana ny tenany.
Mba hanampiana azy dia manotra ny vavony (amin'ny boribory famantaranandro) 5 minitra aorian'ny fisakafoanana.
Ary raha tsy izany dia afangaro amin'ny menaka kely (nilatsaka vitsivitsy) ny sakafonao.
Salama! Tonga sakaiza ny saka ko ary nitondra ny sakaizany nody ary niteraka kittens 3. Manana 20 andro izy ireo. Omaly aho dia nanokatra fivarotana trondro ary nitondra steak roa mba homena ireo ray aman-dreny vaovao ankoatry ny sakafo maina. Rahoviana aho no afaka manome trondro (hokikisako tsara) amin'ireo zazakely?
Voaketaka tsara dia afaka manomboka manome azy ireo ianao izao, fa tsara kokoa ny miandry mandra-pahafatiny 10 andro hafa 🙂
Salama manana olana aho. Ny saka dia nanana kittens efatra, 17 andro izy ireo ary tsy te hampinono intsony ny saka ary tena miahiahy aho satria mitomany be izy ireo, indraindray mitazona ny saka an-keriny ary avy eo vao mihinana ny saka. Sa mety tsy mamokatra ronono ny saka?
Amin'ny 17 andro dia afaka manomboka mihinana sakafo matanjaka sy malefaka be izy ireo, toy ny saka saka mando. Amin'ny Ity lahatsoratra ity io dia manazava ny fomba fanazarana azy ireo mihinana zavatra matanjaka.
Na izany na tsy izany, raha afaka manana ronono mandritra ny telo andro izy ireo, mandra-pahatongan'ny faha-20 taonany, dia zavatra tsara ho azy ireo izany.
Salama alina, manana zanak'ondry aho, notsaboina izy tamin'ny 21 Jolay 2017 saingy manana baolina kely amin'ny ampahany amin'ilay fandidiana izy, ao anaty vavony io, ho ara-dalàna.
Raha manana fiainana ara-dalàna tanteraka ny saka dia mety ilay ratra sitrana no tadiavinao. Rehefa mandeha ny fotoana dia mahamarika kely kokoa anao.
Brian Becerra dia hoy izy:
Salama, tsy dia misy ifandraisany firy izany fa antenaiko fa manoro hevitra ahy ianao hiaina irery miaraka amin'ny reniko ary amin'ny maraina handeha hianatra aho ary miasa ny reniko izay mitranga dia efa 4 herinandro ny zanak'akanjako (dimy taona) antitra ary ny reniko dia toa marary satria tsy te hihinana izy ary tato ho ato dia tsy te-minono aho ary koa ny zana-trondro mandositra ny boatin'izy ireo ary manomboka mihombo be ary tsy haiko raha afaka 4 herinandro afaka mihinana ny saka. Azonao atao ny mahita fa tsy te handao ny zanak'ineny izy ireo, tsy fantatro izay hatao fa matahotra aho fa harary izy ireo na nisy zavatra nanjo azy ireo ary manahy ihany koa aho momba ny fahasalaman'ny saka.
Valiny tamin'i Brian Becerra
Kittens amin'ny 4 herinandro dia efa afaka mihinana sakafo saka mando, na sakafo maina atono rano.
Raha ny momba ny renim-pianakaviana dia mpitsabo mpanampy no tena mahita azy. Ho hainy ny milaza aminao izay tsy mety aminy sy ny fomba hitsaboana azy.
Mandritra ny 20 andro dia azonao atao ny manomboka manome azy ireo sakafo lena ho an'ny zanak'ondry, voatetika tsara, fa amin'ity toe-javatra ity dia tsara kokoa ny mitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby mba tsy ho faty intsony.
Iray volana sy efatra andro ny zanako-vavy. Tsy eo ny reniny ary maneho hevitra izy nefa tsy manidina izy, inona no hataoko? ??
Mila mandalo baolina landihazo mando amin'ny rano mafana amin'ny faritra misy ny lohany folo minitra aorian'ny sakafo ianao.
Raha tsy izany dia omeo vinaingitra kely (sotro kely sotro kely). Izany no tokony hahafahany manala ny tenany.
Hannah dia hoy izy:
Ny zanako vavy dia nanana zanak'omby efatra ary nandeha tsara ny zava-drehetra fa ny mampiaraka ny volony dia very izany dia ara-dalàna na marary izy.
Valiny tamin'i Hana
Tsia, tsy mahazatra izany. Manoro hevitra ahy aho ny hitondra azy ho any amin'ny mpitsabo biby.
Yira dia hoy izy:
Salama, ny saka kitapoko 4 kittens, 17 andro izao, salama sy mihetsika izy ireo, saingy manahy aho fa isan'andro izy ireo mifoha miaraka amin'ny masony miraikitra amin'ny laganzas ary tsara ...
Valio i Yira
Azonao atao ny manadio azy ireo amin'ny metaly mando amin'ny fampidirana chamomile, intelo isan'andro.
Raha tsy mivoatra izy ireo ao anatin'ny herinandro, dia asaiko mitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo nify.
Monica restrepo dia hoy izy:
Salama! Manana kittens roa eo amin'ny iray volana sy sasany eo ho eo aho ary tsy te hihinana vazo matevina izy ireo, tavoahangy iray fotsiny, mitomany izy ireo nefa tsy manandrana mitady sakafo matanjaka akory ... manome sosokevitra ahy izy ireo! Misaotra !!!
Valiny tamin'i Monica Restrepo
Manoro hevitra ny hividy sakafo saka mando aho. Makà kely amin'ny rantsan-tànana ianao, ary ataonao ao am-bavany (mafy fa tsy mandratra azy). Aorian'ny fanandramana roa na telo dia tokony hihinana irery izy amin'ny fombam-pahalalahany. Raha tsy izany dia azonao afangaro amin'ny ronono tsy misy lactose kely.
Salama, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, ny saka tsy te hampinono ny zanany intsony ary mbola 13 andro izy ireo, mila manery azy aho ary mitomany noho ny hanoanana izy ireo, inona no azoko atao?
Mazava ho azy fa ny zanany dia tokony hisotro ronono mandritra ny herinandro iray farafahakeliny.
Raha tsy te hanome azy ireo ny reny dia tsy maintsy omena tavoahangy iray isaky ny adiny 3 ianao ary hamporisihana ny faritra misy ny taovam-pananahana miaraka amin'ny gazy mando amin'ny rano mafana hanamaivanana ny tenany.
Ny ronono solony tsara indrindra dia ilay amidiny voaomana any amin'ny tobim-pahasalamana sy toeram-pivarotana biby, fa raha tsy azonao dia azonao atao ity manamboatra ity:
Yaorta tsotra 50ml (tsy mamy)
Yolk atody (tsy fotsy)
Francisca lillo dia hoy izy:
Salama, manan-janaka vavy iray volana sy 1 herinandro aho ary efa mihinana sakafo matanjaka tsy misy olana izy nefa manahy aho fa ho simba ny nifiny, satria mbola tsy mivoatra tanteraka izy ireo. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Francisca Lillo
Azonao omena azy ny sakafo saka zanak'ondry lena, na afangaro amin'ny rano kely ny kibble. Aza manahy momba ny nifiny: raha hitanao fa mitsako tsara izy, tsy mitaraina, tsy misy olana.
Elizabeth cordoba dia hoy izy:
Salama, ny saka dia nanana kittens 4, ary isan'andro saka saka mpiara-monina amiko dia nandao azy ireo aho tamin'ny andro nametrahako azy ireo, izay nametrahanay ny zanak'alika teo akaikiko ary hitako fa reraka ny saka ary tezitra amin'ny fotoana fampinonoana azy ireo. . Misy 8 ... ary ny sasany tavela 20 andro, afaka manampy azy ireo ve aho fa tsy noana loatra ary milamina kokoa ny saka ???
Valiny tamin'i Elizabeth cordoba
Mandritra ny 20 andro dia azonao atao ny manomboka manome azy ireo sakafo saka (kapoaka) mando, na irery na lena anaty rano mafana.
Raha tsy mihinana izy ireo dia makà kely amin'ny rantsan-tànanao ary ataovy ao am-bavanao. Atelina azy ireo amin'ny fanao voajanahary. Avy any izy ireo dia mety hihinana samirery, saingy mety ilaina ny mamerina ny sakafo ao am-bavany.
Ataovy mafy nefa malefaka, nefa tsy mandratra azy ireo.
Salama, zanako vavy 5 herinandro, efa manome sakafo saka ho azy aho, misotro ronono saka izy ka amin'ny alina vao omeko sakafo. Saingy hitako fa mandritra ny andro dia aleoko kokoa toy izay ny bibi. Izy io dia afaka omena indray mandeha isan'andro fotsiny fa mbola tsy hitako? Ao amin'ny kitapo zazakely mpanjaka dia mametraka 30gr isaky ny 24 ora
Amin'ny 5 herinandro dia efa azonao atao ny mihinana sakafo matanjaka malefaka, in-2-3 isan'andro. Afangaroy amin'ny rononon-tsaka mandra-pahatongan'ny roa volana.
Salama, iray volana ny mpiray volo amiko ary mandray ronono amin'ny tavoahangy. Fotoana tokony hijanonana amin'ny fanomezana ve izao?
Rehefa afaka iray volana dia efa afaka mihinana sakafo saka (volo) mando ianao, fa afangaro amin'ny ronono, ka ho mora aminao ny hanazatra azy.
paty dia hoy izy:
Salama aho manana saka iray volana sy roa herinandro ary ny ahiahiko dia hoe mandritra ny andro dia manao izay tsara ao anaty boaty miaraka amin'ny fako izy amin'ny alina fa amin'ny alina kosa dia mahatonga ahy ary tsy fantatro ny antony ... Ary ny ny iray kosa nanome azy ronono tsy misy lactose ary nesoriko izany ary tsapako fa nampiasaina imbetsaka isan'andro izy io ary malefaka be ... ilaina ny ronono
Valiny tamin'i Paty
Mandritra ny enina herinandro tsia, tsy ilaina ny ronono 🙂. Mazava ho azy, tsy maintsy manomboka misotro rano ianao. Azonao atao ny manoboka ny sakafony amin'ny rano mafana mba tsy hafahafa loatra.
Viviana Veliz dia hoy izy:
Salama, roa herinandro lasa izay dia nahita zanak'akanjo kely tamin'ny seza lava-tanana teo amin'ny tokotanin'ny tranon'ny reniko izahay, tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no teraka na iza no tompony, nomen-dreniny ronono izy ireo saingy toa nijanona izy andro vitsivitsy lasa izay ary androany ihany. tsapanay izany satria nitomany izy ireo ary zara raha nihetsika, navelan'ny raiko tao anaty kaopy izy ireo fa nilatsaka ny iray ary maty, tsy hitako izay hatao satria toa ho faty izy ireo
Valiny tamin'i Viviana Veliz
Ireo zanak'osy dia tsy maintsy mipetraka amin'ny toerana milay sy mafana ireto zanak'omby ireto, satria tsy hanara-dalàna ny hafanan'ny vatany raha tsy efa roa volana.
Ho fanampin'izay dia tsy maintsy misotro ronono tsy misy lactose amin'ny tavoahangy iray isaky ny adiny 3 izy ireo, ary misy olona mila mandrisika azy ireo hanala tena. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao eto.
Nahita kittens telo manodidina ny telo herinandro aho. Ary miaraka amin'ny maso miraikitra izy ireo ary tena ratsy tarehy ilay aretina ary tsy haiko izay hanome azy ireo sakafo. Ampio!
Azonao atao ny manadio ny mason'izy ireo amin'ny gaza mando amin'ny fampidirana chamomile, intelo isan'andro.
Mandritra ny telo herinandro dia azon'izy ireo atao ny mihinana sakafo saka (kapoaka) lena mifangaro amin'ny ronono kely ho an'ny saka amidy any amin'ny tobim-pahasalamana veterinary, na amin'ny rano mafana, isaky ny 3-4 ora.
Florencia dia hoy izy:
Salama, manana saka vavy 40 andro aho. Omeko rano fotsiny izy, ny ronono voaharatra. Ary miondrika izy fa tsy poop. Telo andro no nanaovako azy ary tsy haiko raha mahazatra ny misotro ronono fotsiny, na tsia. MISAOTRA
Valiny tamin'i Florence
Amin'io taona io dia efa azonao atao ny mihinana sakafo saka (vata) mando, afangaro amin'ny ronono kely ahetsiketsika amin'ny rano, na amin'ny rano irery.
Na izany na tsy izany, raha tsy manondraka izy dia amporisiho ny faritra misy ny taovam-pananahana miaraka amin'ny gazy mando amin'ny rano mafana 10 minitra aorian'ny fisakafoanana. Mila mikorisa farafaharatsiny indray mandeha isan'andro ianao.
Raha sanatria ka tsy izany dia amporisihiko ianao hitondra izany any amin'ny mpitsabo biby.
Maria Patricia Pena dia hoy izy:
Ampio aho azafady! Naka zanak'ondry aho, tokony ho roa volana, herinandro lasa izay.
Amin'ity fotoana ity dia ronono fotsiny no tadiaviny. Tamin'ity herinandro ity dia in-5 monja izy no nandoto (natsanganako tamin'ny alarobia 1 novambra ary zezika ny zoma 3 novambra, asabotsy 4 novambra, alatsinainy 6 novambra (in-2) ary talata 7 novambra (in-1.) I nanandrana namahana ny volony, wiskas kitty lena, hena manta, ricocat an'ny kitty, fa tsy te hanandrana izy, na nisotro rano.
Nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy tamin'ny alatsinainy 6 novambra, noraisin'izy ireo ny hafanany, nolazain'izy ireo tamiko fa milamina ny zava-drehetra ary toa feno ihany izy, nefa tsy tery, na izany aza dia nanoro hevitra ny fampifangaroana ny rononony tamin'ny menaka oliva aho, nataoko, Fa tamin'io andro io ihany dia nanalany rano indroa sy indray mandeha ny ampitso (talata).
Milalao be dia be izy, toa tsy marary izy, saingy matahotra aho sao harary satria tsy mandoto na mihinana sakafo matanjaka.
Valiny tamin'i Maria Patricia Peña
Salama Maria Patricia.
Mandritra ny roa volana eny, tokony hihinana sakafo saka 🙁 aho
Lafo be izy io, saingy ampirisihiko hanome azy ny Royal Canin Baby Cat. Kibble dia kely dia kely ary, rakotra ronono dia kittens mazàna tiany be. Raha tsy azonao na tsy zakanao (raha ny tena izy, somary avo ny vidiny), tadiavo ny croquette toy izany, izay misy ronono.
Safidy iray hafa ny mandroboka ny sakafony amin'ny ronono omenao azy.
Indraindray dia ilaina ny "manery" azy ireo hihinana. Makà sombin-kanina iray - tsy maintsy ho kely dia kely izany - ary ataovy ao am-bavanao. Akatony moramora nefa mafy. Amin'ny fanao voajanahary no hitelina azy. Ary avy eo dia azo inoana fa efa mihinana samirery izy io, fa mety maharitra imbetsaka.
Salama. Androany efatra herinandro lasa izay dia namonjy zanak'ondry roa sahabo ho roa tapa-bolana aho (ny ampitso dia nanokatra ny masony izy ireo). Hatramin'ny omaly alina dia tsy te-hisotro tavoahangy izy ireo na hihinana ronono be zotram-po, fa liana amin'ny fihinanana maina. Tsy tian'izy ireo ny misotro rano, inona no tokony ataoko? MISAOTRA
Amin'ny volana iray amin'ny fiainana dia tokony efa mihinana sakafo matanjaka izy ireo. Raha mampiseho fahalianana amin'ity karazan-tsakafo ity izy ireo dia famantarana tsara izany.
Avelao izy ireo hihinana, fa hosory amin'ny ronono na rano kely, na dia kely aza. Na raha tsy izany, asio tavy ho azy ireo hahafahan'izy ireo mianatra misotro rano samirery.
Lilly dia hoy izy:
Salama, manana saka kely efa ho roa volana aho (2 dec) ary mbola tsy te hihinana na inona na inona, dia efa nanandrana nanome azy pate na mofomamy nandrotsaka aho ary tsy nisy .. Manahy aho satria ny saka (reniny) tsia lava ve ny olona mampinono ary mihahena ny lanjany zavatra hafa, ara-dalàna ve ny vao nanomboka nikotrokotroka androany aho? (Nov 25) Inona no azonao atoro ahy?
Mamaly an'i Lilly
Andramo sakafo ny saka zanany mando voahosotra ronono na rano mafana. Na, mitadiava sakafo saka any amin'ny fivarotana biby mandena ronono, toy ny Royal Canin Baby Cat.
Salama! Naka saka vitsivitsy izahay herinandro lasa izay. Manana 2 volana sy 1 herinandro izy ireo, saingy ronono manokana ho an'ny saka ihany no tadiavin'izy ireo, niezaka izahay hanome azy ireo sakafo manokana ho an'ny zanak'alika sy paté fa tsy noraharahain'izy ireo izany, ny zavatra tokana azon'izy ireo hohanina ao York Ham, ezahinay afeno ny pellet sasany hamahanana ny York Ham, indraindray nohanin'izy ireo izany, tamin'ny fotoana hafa nandrora azy ireo, saingy mbola tsy nahasarika ny sain'izy ireo ihany, hanandrana handemana ireo croquette amin'ny ronono manokana aho araka ny hitako tamin'ny fanehoan-kevitra sasany. Fa raha tsy mandeha izany dia tsy hitako intsony izay hatao! Inona no ampirisihinao hataoko? Mangetaheta azy ireo izahay hisakafo irery izao, satria tsy afaka mandany andro miaraka amin'izy ireo izahay satria miasa. Mirary ny soa indrindra.
Raha mahatakatra anao aho. Ny iray amin'ireo saka izay ananako ao amin'ny zaridaina dia nandalo zavatra mitovy amin'ny sakao ihany koa.
Saingy voavaha haingana dia haingana tamin'ny fanomezana azy sakafo saka izay misy ronono.
Tsy dia tiako loatra ny manome ity marika ity, fa izao no fomba hanampiany azy ireo ho zatra: Royal Canin First Age. Lafo ny vidiny (misy serealy ary ny serealy tsy dia mandevona ny saka, miampy tena mora), nefa tsara. Amin'ny maha-sakafo matanjaka voalohany azy dia mety mendrika izany.
Antonio Gonzalez dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray, manana kittens 2 aho ary 31 andro izy ireo ary tsy fantatro izay hamahanana azy ireo ary firy andro no hikasako azy ireo.
Valiny tamin'i Antonio González
Azonao atao ny manome azy ireo sakafo saka mando mifangaro amin'ny ronono saka na rano mafana.
Afaka mikasika azy ireo izao ianao.
yamile dia hoy izy:
Salama manana zanakalahy 27 andro aho, nilaozan'ny reniny izy tamin'izy 3 andro, tiako ho fantatra raha afaka manome sakafo matanjaka azy aho ary mandra-pahatongan'ny firy taona no tokony hamenoako ny sakafo amin'ny ronono, satria mandà izy indraindray ny tavoahangy na manaikitra azy misaotra
Mamaly an'i yamile
Amin'io taona io dia efa afaka manome sakafo matanjaka (malefaka) ho azy ianao. Robohy anaty ronono mandritra ny iray volana sy sasany mahery na latsaka ao anaty ronono, avy eo apetaho amin'ny rano ilay mpisotro mba ho zatra.
Salama, manana saka iray volana aho ny 16/9/2018 izy 2 volana nefa izao mihinana irery, tsy misy na inona na inona raha misakafo irery aho dia omeko sakafo saka alika kely izy ary ho torotoro ny sakafo ka malemy kokoa ary misotro ronono raika ihany koa izy tsy misy mitranga raha mihinana an'io sakafo io ianao?
Mamaly an'i santy
Eny, amin'io taona io dia efa afaka misakafo irery izy ireo.
hace Andro 5
Salama, 2 andro lasa izay naka saka kely 2 volana aho, novidiako ho azy ny sakafo mando sy maina hanina, nefa tsy te hihinana izy, maimbo azy ary voila, na dia noana aza izy dia tsy mihinana, ka Nividy ronono vovoka mandevona amin'ny rano mafana aho, tiako ny mitazona fa ity ronono ity dia mpisolo toerana ny rononon-dreny ary mihinana irery avy ao anaty lovia, tsy mila tavoahangy na inona izany ... ny fanontaniako dia. Ahoana no fomba hampianarako azy hihinana solida nefa hanome ronono?
Valiny tamin'i Simona
Voalohany indrindra, miarahaba anao noho io fanampim-baovao io ho an'ny fianakaviana. Azo antoka fa hankafy azy io ianao 🙂
Mikasika ny fanontanianao dia afaka manomboka mihinana sakafo saka mando izy mandritra ny 2 volana. Tokony hotetehinao tsara izy io mba hahamora azy.
Raha tsy miraharaha na mandà azy ianao dia mandena azy amin'ny ronono sotroinao. Raha mihinana azy izy dia tonga lafatra. Rehefa mandeha ny herinandro dia tsy maintsy mihabe ronono mihakely ianao.
Raha sendra tsy mihinana azy izy, ary satria, mazava ho azy, tena ilaina ny mihinana azy, tsy maintsy terenao moramora izy nefa hentitra ihany koa. Makà sakafo kely lena miaraka amin'ny tendron'ny rantsan-tànana iray ary apetaho eo am-bavanao. Koa satria mety hanao izay farany vitany izy amin'ny famoahana azy, dia mila mihidy ny vavany ianao mandritra ny segondra vitsy, mandra-pitelany azy amin'ny farany.
Aorian'izay dia mety hihinana irery tsikelikely izy.